अदालतले छोड्यो, जेलबाहिरै फेरि समातिए मानव बेचबिखनमा वडाध्यक्ष - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
अदालतले छोड्यो, जेलबाहिरै फेरि समातिए मानव बेचबिखनमा वडाध्यक्ष
Published On : ७ बैशाख २०७५, शुक्रबार १९:३४
काठमाडौं- सर्बाेच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको भोलिपल्टै शुक्रबार नुवाकोटका सुकबहादुर तामाङ कारागारबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै पक्राउ परेका छन्।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो- सीआईबीको टोलीले ४९ वर्षीय तामाङ अदालतको फैसलाले छाडिन लाग्दा अदालतकै अर्काे फैसलाका आधारमा पक्राउ परेका हुन्।
२०७१ सालमा दर्ता भएको मानव बेचबिखन मुद्धामा नुवाकोट जिल्ला अदालतले गत चैत ७ गते तामाङलाई ३७ वर्ष ६ महिना जेल सजाय, दुई लाख र ४० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। तर त्यतिबेला सुकबहादुर मानवबेचबिखनकै अर्को मुद्धामा जेलमा थिए।
अदालतले गरेको फैसलामा दोषी ठहर भएका ब्यक्तिको विभिन्न विवरण र सुकबहादुरले पेश गरेको आफ्नो विवरण फरक भएपछि सर्बाेच्चले बिहीबार उनलाई छाड्न आदेश दिएको थियो। काँकडभिट्टाको बाटो हुँदै दुई युवतीलाई भारततर्फ लैजान लाग्दा प्रहरीले उनीहरुको उद्धार गरेको थियो। ती युवतीकै जाहेरीका अाधारमा सुकबहादुरविरुद्ध २१ वर्षअघि मुद्धा दर्ता भएको थियो। तर उद्धार गरिएर ल्याईएको ती युवती पछि भारतमै बेचिएको प्रहरी बताउँछन्।
पीडितलाई उपस्थित गराउन नसक्दा सुकबहादुरले आफू फरक ब्यक्ति भएको दाबी गर्दै उम्कन सकेको प्रहरी बताउँछन्।
वडाध्यक्ष बनेपछि प्रहरीको निशानामा
अदालतले फैसला गरेको वर्षौ बित्दासमेत प्रहरीले सुक बहादुरलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन वा गरेको थिएन। तर गत स्थानीय तह निर्वाचनमा सुकबहादुर नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सुकबहादुरका कर्तुतका पछाडि प्रहरी लागेको थियो।
यसैक्रममा सीआईबीमा मानव बेचबिखनको मुद्धा दर्ता भएपछि सुकबहादुरलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याईएको थियो। त्यतिबेलै अर्काे मानवबेचबिखनको जाहेरी आएपछि सुकबहादुरविरुद्ध दुई वटा मुद्धा एकसाथ अगाडि बढाईएको थियो।
तर जिल्ला अदालतले दुवै कसुरमा पाँच लाख र तीन लाख गरी कुल ८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। धरौटी बुझाएर बाहिरिन लाग्दा सीआईबीको टोलीले २१ वर्ष पुरानो मुद्धाको फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै सुक बहादुरलाई समातेको थियो। सिआईबीमा दर्ता भएका मुद्धामा अदालतले दिएको धरौटीमा छाड्ने आदेशका विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको छ। यी मुद्धामा सुकबहादुरकी श्रीमती समेतलाई प्रतिवादी बनाईएको थियो। सुकबहादुरकी श्रीमती भने फरार छिन्।